October 2, 2021 - Babal Khabar
Oct22021 by बबाल खबरNo Comments
म से क्सी हुँदा तपाईंलाई के स’मस्या ?
पुरा खबर, चर्चित गायिका ज्योति मगरले केही समय अगाडी फेसबूकमा एउटा तस्वीर शेयर गरिन् । बोल्ड तस्वीरहरू सार्वजनिक गर्नु त उनका लागि सामान्य नै हो । तर आइतवार तस्वीरसँगै उनले लेखेको ‘क्याप्सन’ले सबैको ध्यान तानेको छ । एक कार्यक्रमका लागि नेपालगञ्ज उड्नुअघि उनले लेखेकी छन् म से क्सी हुन रोक्न सक्दिनँ । यो मेरो रगतमा छ । यदि यसलाई तपाईंले सहजै लिन सक्नुहुन्न भने यो तपाईंको समस्या हो । मलाई बाल मतलब । सायद ज्योती मगर यो नाम नसुनेको कमै मात्रामा मात्र होलान । ज्योती मगर नेपाली गित सँगितकी एक चर्चित गायिका मोडल पनि हुन । उनले बिशेष गर। रोमान्टिक गितको धेरै म्युजि भिडियोमा अभिनय समेत गरेकी छन । उनी आफै पनि धेरै गितहरुमा स्वर भरेकी छन । उनले गाएका गितहरु उही मुलाको सिन्की सिरक तानातानम पिरतीमा दम छ ढाडे बिरालो लागयतका धेरै गितहरु चर्चित एवं लोककप्रिय गरेका छन । उनले स्टेज कार्यक्रमहरुमा
शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्न इ’च्छा हुदाँ म’हिलाले देखाउने ५ व्य’वहार
पुरा खबर, संसारभरी नै एउटा मान्यता छ महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । केटीहरु कम बोलेर धेरै कुरा भन्छन् । पु’रुषले म’हिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् ।उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु मह’त्वपूर्ण हुन्छन् । महिलाले यौ’निक चाहना पनि शब्दमै ब्यक्त नगर्ने एक अध्यनले देखाएको छ । यहाँ महिलाले यौ’न स’म्बन्ध राख्न चाहेको समयमा देखाउने ५ ब्यवहारको चर्चा गरिएको छ । मा’हिला अनपेक्षितरुपमा तपाइँको शरीरको सामिप्यतामा आउन खोजिन् वा तपाइँलाई छुने बहाना खोजिन् भने बुझ्नुस् उनलाई यौन चाहाना जागेको छ । महिलाहरु खुट्टाको बुढी औंलाले भूइँमा कोतर्न थाले भने पनि उनीहरुको चाहाना बुझ्नु पर्छ । कतिपय स्त्रीहरु च्याटमा त्यस्तै खालका साइन पठाउने वा फोहोर कुरा गर्ने गर्छन् । यदि स्त्रीले तपाइँको नजिक भएर लामो लामो लामो र गहिरो स्वास लिइरहेको अनुभव गर्नु भो भने उनलाई उ’त्तेजना भैरहेको छ भन्ने बुझ्नुस
आफ्नै श्रीमानलाई पनि थाहा हुँदैन महिलाले यी गो,प्य कुराहरु !
खबर अघि यो भिडियो हेर्नुस, हाम्रो समाजमा भनिन्छ, पतिपत्नीबीच कुनै पनि कुरा लुकेको हुदैन । आफूले भोगेका तीता मिठा सबै अनुभव साटासाट गर्दछन् । उनीहरुले एकअर्काका दुःख सुख साट्ने गर्दछन् र स,मस्यामा भएमा एकअर्कालाई सहयोग गर्दछन् भन्ने मान्यता हाम्रो समाजमा रहेको पाइन्छ । तर कुनै कुनै कुरा यस्ता हुन्छन् जसलाई उनीहरुले एकअर्कालाई कहिल्यै भन्दैनन् । त्यस्तै हरेक महिलाले आफ्नो पतिबाट लुकाएर राख्ने केही कुरा छन् । पु’रुषका बारेमा महिलाई प्रायजसो सबैकुरा थाहा हुन्छ। मानव सृष्टिको रचनाकार नै महिला भएकाले पु’रुषको बारेमा थाहा नहुँने त कुरै भएन। तर महिलाका बारेमा कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन् जुन पुरुषले कहिल्यै पनि थाहा पाउन सक्दैनन् । के हुन् त त्यस्ता कुरा रु जुन महिलाले लुकाएर राखेका हुन्छन् र पुरुषले थाहा पाउन सक्दैनन् । रोमान्सः केटाहरु रोमान्स मन पराउने खालका हुन्छन् यो कुरा सबैलाई था
पु’रुषहरुले दै’निक ‘१०’ मिनेट म’हिला-को स्त’न हेरे आयु बढ्ने बै’ज्ञानिक;हरुको यो कस्तो दा’बी ?
पुरा खबर, हाम्रो समाजमा म’हिलाहरुलाई घू’रनुलाई एक अ’प’रा’धको श्रेणीमा रााखिएको छ । जबकि त्यसको ठीक उल्टो प्रतिदिन म’हिलाहरुलाई १० मिनेट सम्म घू’री रहनु पु’रुषहरुका निम्ति स्वा’स्थ्यवर्धक हुन्छ भन्ने न्यू ई’ङ्गल्याण्ड जर्नल अफ मे’डिसिनमा प्रकाशित एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । पु’रुष यदि दिनहुँ १० मिनेट सम्म म’हिलाहरुको स्त’न’लाई घू’रेर हेरिरह्यो भने उनिहरुमा केवल हृ’दयघा’तको संभावना कम रहन्छ ब’ल्कि उनिहरुको आ’युपनि बढ्छ । डाक्टरहरुका अनुसार उन्नत वक्ष भएका म’हिलाहरुलाई प्रतिदिन १० मिनेट सम्म घू’रेर हेर्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । वैज्ञानिकहरुको त यस्तोसम्म भनाई रहेको छ कि ठू’लाठूला स्त’न भएका म’हिलाहरुलाई घू’रे’र हेर्नेहो भने पुरुषहरुको उमेर बढछ । सर्वेक्षणको नि’ष्कर्ष छ केहि मिनेट महिलाहरुको स्त’न’हरुलाई नि’या’ली रहने हो भने स्वास्थ्यका निम्ति जि’म जानु भन्दा राम्रो हुन्छ ।
यी ७ कारणहरुले गर्दा केटीहरुले कहिलै पनि बि’हे गर्न चाहदैनन् !
पुरा खबर, धेरै मान्छे आफ्नो वि’वाहसँग स’म्बन्धित धेरै सपनामा हराइरहेका हुन्छन् । उनीहरू वि’वाहसँग स’म्बन्धित एउटा छुट्टै सोच र सपनामा केन्द्रीत पनि हुने गर्छन् । तर पछिल्लो समय वि’वाह नगर्ने सोच बनाउने म’हिलाहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । अहिले केटीहरूको सोचमा पनि धेरै परिवर्तन हुन थालिसकेको छ । यसका पछाडि धेरै कारणहरू हुन्छन् । क्यारियरको लागि केटीहरूले कति अध्ययन गरेका छन् भन्ने कुराले फरक पार्दैन । तर विवाहपछि उनीहरूको अ’ध्ययनलाई छायामा राखिन्छ। उनीहरूले वि’वाहपछि काम नै गरे पनि घर र कार्यालय दुवैलाई सँगै व्य’वस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर दुवै काम गरे पनि श्रीमान् र परिवार कहिल्यै खुसी हुँदैनन् । जसले क्यारियरमा समस्या सिर्जना हुने गर्छ । त्यसैले बरू अ’विवाहित जीवन नै उनीहरूको रोजाइमा पर्ने गर्छ । हरेक कुरामा अवरोध हुने भएकोले आजको समय सबै केटीहरू आफ्नो स्व’तन्त्र ज
पहिलो भेटमा पुरुषहरू बढी ख्याल दिन्छन् महिलाका यी अं’गहरूमा !
पहिले यो भिडियो हेर्नुस, पुरुषले पहिलो पटक महिलालाई हेर्दा कस्तो कुरामा विशेष ध्यान दिन्छन् त रु यो कुरा धेरै महिलाहरुको लागि चासोको विषय बनेको हुन सक्छ । जब कुनैपनि युवकको अपरिचित युवतीसँग आँखा जुध्छ । युवकले त्यसपछि नजरले भ्याउन्जेल एकसरो युवतीको सिरदेखि पुच्छार सम्म हेर्छ । पहिलो नजरमा जिउका सबै भागमा आँखा पुराउन सक्ने कुरा भएन । आखिर पुरुषले पहिलो नजरमा महिलाका कुन कुन भाग वा विषयमा ध्यान दिन्छ होला रु मनोविज्ञहरुका अनुसार पुरुषले सुरुमै महिलाका यी ५ कुरामा ख्याल राखेको हुन्छ कपाल पुरुषले महिलाको सरीरमा सुरुमै ख्याल राख्ने एउटा अं’ग हो कपाल । यसको मतलव पुरुषले निकै लामो कपाल मात्र मन पराउँछ भन्ने होइन ।तर सफा, स्वस्थ तथा आकर्षक कपाल भएकी महिलाले पुरुषलाई आ’कर्षित गर्न सक्छिन् । भनिन्छ युवतीसँग आँखा जुधाइरहँदा युवकले ती युवतीको कपाल सु’म्सुम्याइरहेको कल्पना गरिरहेको हुन्छ